बारेकोटको रामीडाँडा मेला यस बर्ष लाग्ने : पुरुष भलिवलको प्रथम पुरुस्कार ८० हजार – Hamropahuch
२३ आश्विन २०७८, शनिबार
स्थानीय तह विशेष
त्रिवेणी गोल्ड कपको आईतबारको नतिजा, कस्ले कसलाई हरायो (हेर्नुहोस नतिजा)
बाटोमा एक लाख पाएपछि.....
स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च कर्णाली प्रदेशको गठन
नलगाडमा जारी त्रिवेणी गोल्डकपको दोस्रो दिन चार खेल
बारेकोटको रामीडाँडा मेला यस बर्ष लाग्ने : पुरुष भलिवलको प्रथम पुरुस्कार ८० हजार
दलित समुदायलाई होच्च्याएको शिक्षकको कमेन्टप्रति संघ संस्थाको आपत्ती
नलगाडमा जारी गोल्डकपमा आज तीन खेल
मैत्रीपुर्ण फुटवलको उपाधी राष्ट्रसेवक समुहलाई, विजेताको हातमा ४० केजीको खसी !
जाजरकोटका अनाथ वालवालिकाहरुलाई जयन्तीको खाद्य तथा शैक्षिक सामाग्री सहयोग
६० रोपनी जग्गामा लगाइएको अवैध गाँजा नष्ट
हाम्रो पहुँच संवादाता २३ आश्विन २०७८, शनिबार मा प्रकाशित
बारेकोट । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा लाग्ने ऐतिहाँसिक रामीडाँडा मेला यस बर्ष सञ्चालन हुने भएको छ । प्रत्येक बर्ष कोजाग्रत पुर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेला विगतमा कोरोना महामारीका कारण स्थगित हुने गरेको थियो ।
यस बर्ष स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै मेला सञ्चालन गरिने मेला आयोजक समितिले हाम्रो पहुँच डटकमलाई जानकारी दिएको छ । मेलामा खुल्ला पुरुष भलिवल, महिला भलिवल, व्याटमेन्टन, लोकगित, लोकदोहरी प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ ।
बारेकोटका स्थानीय लोक झाँक्रीहरु मेलाका मुख्य आकर्षणका रुपमा रहेका छन् । पुरुष तर्फको खुल्ला भलिवलमा दर्ता शुल्क ८ हजार रहेको छ भने प्रथम पुरुस्कार ८० हजार, दृतिय ४० हजार र तृतिय पुरुस्कार २० हजार रहेको छ । महिला तर्फको खुल्ला भलिवल दर्ता शुल्क १ हजार, प्रथम पुरुस्कार ८ हजार, दृतिय पुरुस्कार ६ हजार र तृतिय पुरुस्कार ४ हजार रहेको छ ।
व्याटमिन्टन तर्फ दर्ता शुल्क १५ सय रहेको छ । प्रथम पुरुस्कार १० हजार, दृतिय पुरुस्कार ५ हजार र तृतिय पुरुस्कार ३ हजार रहेको छ । लोकगित दर्ता शुल्क २ सय ५० रहेको छ भने प्रथम पुरुस्कार २ हजार, दृतिय पुरुस्कार १५ सय र तृतिय पुरुस्कार १ हजार रहेको छ ।
यस्तै, लोकदोहरी तर्फ दर्ता शुल्क ५ सय प्रथम पुरुस्कार ५ हजार,दृतिय पुरुस्कार ३ हजार र तृतिय पुरुस्कार २ हजार रहेको मेला आयोजना समितिले जनाएको छ । बारेकोट गाउँपालिकामा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन, फलफुल लगायत अन्य उत्पादनको स्टल समेत लाग्ने छ । मेलामा झन्डै १० हजार भन्दा बढी दर्शक आउने आंकलन गरिएको छ ।
बाटोमा एक लाख पाएपछि…..
Himalya Patra Media Pvt.Ltd
Domain Name: www.hamropahuch.com
Reg. No. २४११/०७७/०७८
Barekot2Jajarkot, Nepal
9863281947, 9867597392, 9844844321
Publisher : Kali Bahadur Nepali
Editor : Parwati BK
Sub Editor : Ramesh Prasad Adhikari
Managing Director : Susil Rawal
Admin : Prakash Chadara
Hari Bahadur Nepali
Dan Bahadur Giri
Lok Raj BK
© 2019 All Right Reserved. hpkhabar